नेकपा एकीकृत समाजवादीको सचिवमा रामकुमारी झाँक्री, को कुनमा चयन भए ? Canada Nepal
नेकपा एकीकृत समाजवादीको सचिवमा रामकुमारी झाँक्री, को कुनमा चयन भए ?
काठमाडौँ - माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीले पदाधिकारीको टुंगो लगाएको छ । बिहिबार बुद्धनगरमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले बेदुराम भुसाललाई महासचिवमा चयन गर्ने सहमति गरेको छ ।
महासचिवमा बेदुरामसहति मुकुन्द न्यौपाने, राजेन्द्र पाण्डे, डा. विजय पौडेल, रामकुमारी झाँक्री, प्रकाश ज्वाला लगायतको चर्चा रहेको थियो । तर बैठकले भुसाललाई महासचिव बनाउने सहमती गरेको एक नेताले बताएका छन् ।
यस्तै उपमहासचिवमा डा विजय पौडेल, डा गंगालाल तुलाधर र प्रकाश ज्वाला चयन भएका छन् । यस्तै उक्त बैठकले रामकुमारी झाँक्रीलाई भने सचिव बनाउने सहमति गरेको बताइएको छ ।
सचिवमा अन्य जगन्नाथ खतिवडा, नागेन्द्र चौधरी र केशवलाल श्रेष्ठको नाम पनि रहेको छ । त्यस्तै उपाध्यक्षहरुमा राजेन्द्र पाण्डे, धर्मनाथ साह, जयन्ती राई र प्रमेश हमाल को नाम टुंगो लागेको छ । अध्यक्षमा भने नेता नेपाल र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल रहेका छन् ।
यी नामलाई आज बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकले अनुमोदन गर्ने छ भने पोलिव्युरो र केन्द्रीय कमिटी पनि विस्तार हुनेछ ।
आश्विन ७, २०७८ बिहिवार १२:०३:२७ बजे : प्रकाशित